Tag: kushambadzira kwepamhepo | Martech Zone
Hazvina mhosva kuti uri maindasitiri api, kana bhizinesi rako riri muchikamu cheB2C, mikana yakanaka chaizvo kuti uri kutarisana nemakwikwi anotyisa - kunyanya kana uri chitoro chezvitinha nedhaka. Mushure mezvose, iwe unoziva kuwanda uye kangani vatengi vanotenga pamhepo mazuva ano. Vafudzi vachiri kuenda kuzvitina & mumatope zvitoro; asi mukana wekutenga pamhepo waita kuti huwandu hwevachengeti vemu-chitoro udonhe. Imwe yemaitiro mabhizinesi ari